Fadeexad ka dhalatay wax isdaba marin lagu sameeyay doorashada Aqalka hoose ee Jubbaland – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Fadeexad ka dhalatay wax isdaba marin lagu sameeyay doorashada Aqalka hoose ee Jubbaland
Wararka naga soo gaarayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegaya in gebi ahaan la hakiyay doorashadii xildhibaanada Jubbaland ee Aqalka hoose baarlamaanka federaalka Soomaaliya, oo ka socotay halkaasi, kadib markii ay soo baxday fadeexo ka dhalatay kursi la isku haysto.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in sababta loo hakiyay doorashada Aqalka hoose ee ka socotay Kismaayo ay tahay, kadib markii ay soo baxday musuq-maasuq lagu sameeyay ergada dooraneysa kursi ka mid ah kuraasta Jubbaland ee Aqalka hoose.
Nabadoonka beesha Gaaljecel Imaam Macalin ayaa la sheegayaa inuu u dacwooday ciidmada ammaanka ee maamulka Jubbalanad kadib markii la badalay ergo aanu isaga soo qorin lagu xareeyay goobta doorashada, taasoo uu ka dambeeyay guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland.
Ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inay is-hortaag ku sameyeen ergada, kadib markii uu nabadoonku liiskiisa goobta kusoo bandhigay, isagoo mid mid u yeeriyay magacyada ergada, halkaas oo ay kasoo baxeen 8 ergo oo been abuur ah.
Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Jubbaland Cabdi Cali Raage ayaa lagu eedeeyay inuu sameeyay wax is-daba marinta ergada ku aadan, waxaana sidaas darteed la joojiyay dhamaan doorashadii xildhibaanada Jubbaland uga mid noqon lahaa Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.